Suuqa: Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala-iibsiga |03-Juun-2021 – Garsoore Sports
Tababarihii hore ee Inter iyo Chelsea Antonio Conte ayaa wadahadalo kula jira kooxda Tottenham, sida ay qortay Gazzetta dello Sport. Conte ayaa diyaar ah inuu u dhaqaaqo London kaddib markii uu ka tagay Inter markii ay ku guuleysteen Serie A ololohii dhowaan idlaaday Spurs ayaa sidoo kale lala xiriirinayay tababarahoodii hore iyo tababaraha haatan ee PSG Mauricio Pochettino, laakiin waxay umuuqdaan inay si aad ah u xiiseynayaan Conte. Tottenham ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa inay ku dhowdahay inay magacowdo agaasimihii hore ee isboortiga Juventus Fabio Paratici.
Telegraph ayaa sheegaysa in Manchester City ay dooneyso inay iska iibiso Bernardo Silva. Waxay kusoo aaday iyadoo City ay dooneyso inay lacag ka hesho xiddigaha ay iibineyso si ay u xoojiso weerarkeeda kaddib bixitaankii Sergio Aguero iyadoo lala xiriirinayo xiddiga Borussia Dortmund Erling Haaland iyo weeraryahanka Tottenham Harry Kane. Eintracht Frankfurt weeraryahankooda Andre Silva ayaa sidoo kale bartilmaameed u noqday, in kastoo Atletico Madrid iyo United ay sidoo kale xiiseeynayaan xiddigan.
Miralem Pjanic ayaa ku laaban kara Italy isagoo sii maraya kooxdiisii hore ee Juve ama Inter, sida ay qortay Sport. Pjanic ayaa ku dhibtooday waqtiga ciyaareedkiisa kooxda uu leyliyo macalin Ronald Koeman ee Barca.
United ayaa weli xiiseyneysa saxiixa daafaca middig ee Atletico iyo England Kieran Trippier, sida ay qortay Daily Mail. Red Devils ayaa sidoo kale ka shaqeyneysa heshiis ay kula soo wareegeyso daafaca Madrid Raphael Varane waxayna weli diirada saarayaan Jadon Sancho oo reer Dortmund ah.
Football Insider ayaa sheegaya in Celtic ay dhammeystirtay heshiiska saxiixa tababaraha Yokohama F.Marinos Ange Postecoglou si uu ula wareego shaqada leylinta kooxda.